Safarka uga imaada Rome kuna aadada Paris By Tareenka Sare | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Safarka uga imaada Rome kuna aadada Paris By Tareenka Sare
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 14/05/2020)
Paris iyo Rome ayaa u sareysa ee liiska baaldi ku dhawaad ​​kasta socotada. Magaalooyinkaas cajiib ah waa caan ah oo dhaqankooda, cunnada-heer caalami ah, fiican naqshadaha iyo si ka badan. Iyadoo Rome iyo Paris kala fogyihiin, ay aad u wanaagsan tahay ku xiran tareen. Taas macnaheedu waxa weeye ma aha in aad si aad u dhexeeya dooran magaalo weyn, labadaba aad booqan kartaa! Si lagaaga caawiyo in aad si safarka sida xiiso leh sida ay suurtagal tahay waxaan kula wadaagi sida looga tago Rome illaa Paris ee loo yaqaan 'Highspeed Train'.
Safarka by tareenada-xawaaraha sare
Waxaad ku dedejin kartaa iyada oo loo marayo France iyo Italy oo isticmaalaya kaliya xidhiidhada-xawaaraha sare. One of the fastest and most comfortable ways to travel from Rome to Paris is by taking the Thello tareenka-xawaaraha sare. tareen Tani casriga ah garaac doonaa in Paris in waqti lahayn. First, waxaad qaadan doontaa tareen xawaare sare ku taga Rome ilaa Milan iyo Milan kuna tagaya Paris dhanka tareenka xawaaraha sare ku socda. waqtiga safarka ee safar this kala duwan, iyada oo ku xidhan tababar aad soo qaado. Waxaan ku talinaynaa aad kursi aad ka hor sida waa in aad sameyso boos tareenada, kuwaas oo si uu u helo kursi.
Lyon ilaa Waqtiyada Tareenka Nice
Qaado wadada muuqaal dabiici ah – Rome ilaa Paris by Train Highspeed Train
Waxay kuxirantahay wadada aad go aansato inaad qaadid markii aad ka safreysid Rome ilaa Paris tareenka aad u sareeya, laga yaabaa in aad rabto in aad ku raaxaysan mid ka mid ah magaalooyinka quruxda badan ee France sahaminta jidka. Fiican soaks ilaa weynaanteedana ee Provence oo waxay saamiyada iyada oo ay qurux badan xeebaha, wareeg ballaaran oo u furan-hawada suuqyada. Joojinta off at Nice ogolaan doonaa inaad si ay u arkaan qayb kale oo cajiib ah ee France iyo xunna jebin doonaa safarka Rome ka Paris.
Booqo magaalooyinka kale ee Yurub jidka
Samee ugu xorriyadda adigoo isticmaalaya tareenada gobollada iyo joojinta off in kale magaalooyinka Yurub. Socda Rome ka Milan, gal Geneva ka hor inta aadan gaarin meesha aad u socoto – Paris.
No safarka tareenka waa in ka badan afar saacadood dheer. Taas ayaa ka dhigaysa this wadada ugu fiican ee dalxiisto kasta oo neceb raacid tareen dheer. Waa wanaagsan tahay in ku haay maanka in qaar ka mid ah magaalooyinka waa qaali more inay soo booqdaan ka badan kuwa kale, si ku xiran miisaaniyada aad jeceshahay waxaa laga yaabaa ah faahfaahin taasi kuma jirto dhamaan magaalooyinkii aan soo xusnay. Fiiri websaydhka oo waad sameyn kartaa safar ku-meel-gaar ah oo kuu gaar ah si Rome kaaga tagto Paris tareen aad u sareeya laakiin sidoo kale laga bilaabo Paris ilaa Rome oo leh isla tareenka. Waxa kale oo aad hayn kartaa ilaa taariikhda la dallacaadaha ugu dambeeyey on our Facebook, Twitter iyo bogagga Instagram.
Fikirka ku saabsan samaynta wadadan Rome ka Paris naftaada? Tag SaveATrain Online si aad u hubiso oo dhan qiimaha our gaar ah iyo bilaabaan qorshaynta quudhin soo socda!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-get-from-rome-to-paris-by-train%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#geneva Roma tareen safarka travelnice travelparis travelrome